Tsara ve ny bisikileta eny an-dalambe? - Bisikileta
Tena > Bisikileta > Hevitra momba ny bisikileta Diamondback road - boky feno
Hevitra momba ny bisikileta Diamondback road - boky feno
Tsara ve ny bisikileta eny an-dalambe?
Na dia fantatra amin'ny vidiny mirary azabisikileta,Diamondbackkoa manao maodely avo lenta sy teknolojia avo lenta ho an'nylalanahazakazaka sy bisikileta an-tendrombohitra. Ny tsipika Haanjo an'nybisikiletadia iray amin'ireo mora azo indrindra, misy safidy amin'ny fivezivezena, fitsangatsanganana ary fitsangatsanganana vatokely izay mahatonga azy io ho mpankafy indrindra amin'ireo mpamoaka lahatsoratra.
Ka eto aho miaraka amin'ny Ty Magner's Diamondback Equipe izay nitaingina ny Rally Cycling Team, izay monina any Etazonia ny ankamaroany, noho izany dia tsy dia matetika loatra isika no mahita ireo bisikileta ireo. Andao hojerentsika akaiky izany. (Techno Music) Ka, Magner, misafidy fefy kely izy izay, raha ny filazan'ny sticker amin'ny fantsom-pohy dia mety amin'ny mpitaingina eo anelanelan'ny 5 sy 5 metatra.
Raha mijery ny lohan-doha ianao dia raharaha lehibe izany, sa tsy izany? ? Ary avy eo dia fantsona midadasika be mihoapampana izay mipaka any amin'ny fonosana ambany, izay fifandraisana PF30. Ary avy eo eo an-tampon'ny seza mijanona izay ampifandraisin'izy ireo amin'ny fantsom-pialana dia misy lavaka lehibe eo isika. Tsy mahazatra izany. ny seza seza, izany dia HED Grand Tour ary ambonin'izany dia manana lasely manam-pahefana manokana isika izay mety ho iray amin'ireo lasely tsy mahazatra hitanao amin'ny bisikilety mahazatra satria mahazatra kokoa izany. mandritra ny fotoam-pitsarana.
Satria rehefa jerenao dia fohy dia fohy, jereo fotsiny ny halaviran'ny niverenany teo amin'ny lalamby. Io dia eo amin'ny fetra, raha ny marina, mihoatra ny fetra izany. Avy eo ny tsorakazo sy ny kitapom-batsy, izany koa ny Grand Tour an'ny HED, hamenoana ny tsatokazo
Ny fotony dia misy 140 mm ary 42 ny sakany. Samy vita amin'ny aliminioma ihany koa ireo. Izany no antony ananantsika ny fanaraha-maso ny fitrandrahana visy SRAM mena ary tariby amin'ireo kalifera vaky mena SRAM.
Ny derailleur mialoha an'ny SRAM mena ary ny derailleur aoriana ary koa crankset SRAM mena. Ary miaraka amina rojo 55. Ity no lehibe indrindra hitako hatreto amin'ny fitsangatsanganana any Dubai ary ampiarahina amin'ny 44 anatiny.
goavana miady hevitra 3 famerenana
Ny metatra herinaratra dia Quarq ary ny DZero The cranks, 172.5 milimetatra ny halavany ary manana pedal SpeedplayTitanium Axled ihany koa avy amin'ny HED ary ny valiny aoriana dia vita amin'ny aliminioma, raha ny karatra foibe eo aloha kosa vita amin'ny karbaona eo afovoany. Ny kodiarana eo aminy dia Kenda SC a ary ny mombamomba azy ireo dia mitovy be amin'i Vittoria na i Veloflex, angamba misy zavatra ao.
Mazava ho azy, ny kodiarana tubular dia mifanaraka amin'ny mombamomba ny 60 mm an'ireny kodiarana HED ireny. Ny fenitra napetraka dia 11-28 ary ity no maodelin'ny SR-PG-1170. Ny sasany amin'ireo famaranana mikasika ny bisikilet'i Magner dia ny kasety fantsom-baravarankely SRAM.
Mahatsiaro spongy kely any, angamba misy gel ao ambanin'ny fantsona ambony. Fihetsika kely mahafinaritra. Raha mijery ny teboka fidirana tariby koa isika, dia esorina izy ireo ka mifanaraka amin'ny vondrona elektronika ity frame ity.
Ka raha mifanaraka amin'ny EPS na Di2 izy ireo dia tsy olana velively. Ary mazava ho azy matetika, rehefa mametraka ny ETAP ianao, dia afaka manangona faladia roa foana. Ka noho izany, ireo fitoeran-tavoahangy tavoahangy, nomen'ny marika amerikana Arundel izay mety ho fantatry ny sasany aminareo, fa raha tsy izany dia azoko atao ny mahita azy ireo amin'ny bisikileta World Tour ao amin'ny Cobbled Classics taloha.
Eny, mividy azy ireo aho ary mamerina azy ireo ary mampiasa azy ireo. Ary ny add-on farany kely dia eto K-Edge. Ka eo aloha dia manana GPS mount isika ary eo aoriany dia misy mpihazona isa kely izay mipetaka eo ambanin'ny kaliperin'ny volo any aoriana.
Ny refy avy eo afovoan'ny fonosana ambany ka hatramin'ny tampon'ny lasely dia 70,5 santimetatra ary avy eo amin'ny tendron'ny lasely mankany afovoan'ny hazomandry 59.7 santimetatra.
Ary izao amin'ny fitsapana Sound Hub Free. Andao handanja izany, sa tsy izany? Milanja 7,1 kilao ny lanjany.
Andao hiresaka amin'i Ty Magner ary hizaha ny antony nifidianany ireo singa ireo. Eny ary, ankehitriny, ny tompona bisikileta, Ty Magner, dia manatevin-daharana anay. Eny ry Ty, lazao anay ny momba ilay lasely.
Fohy kely fotsiny. Somary nibontsina kely ilay izy. Inona no anton'izany? - Ie, amin'ny ankapobeny, miezaka ny manitatra araka izay tratra aho.
Manana olana kely aho, manana lava sandry lava aho, vatana lava ambony sy tongotra fohy, ka tsy maninona izay bisikileta azoko. Miezaka ny lava kokoa aho ary raha fantatrao fa mihazakazaka amin'ny ekipa samihafa ianao ary mahazo faritra samihafa ka mampifanaraka foana - ary efa nanana bisikileta sy zavatra toa izany ve ianao? Fantatrao izany, sa ny fomba itiavanao azy araka ny fijerinao manokana? - Eh, raha ny fahitako azy fotsiny. Nanana lalan-bisikileta vitsivitsy aho ary nanova zavatra vitsivitsy izahay, saingy miverina amin'ny toerako taloha ihany aho, izay mahafinaritra.
Fa eny, efa nataoko nandritra ny fotoana kelikely izany ary izany no tena mety amiko. - milay. Ary tsy haiko ny mahita fa misy gadona 55-nify eo.
Alika be io nentinao teto Dubai io. - Ie, hoy izy ireo fa haingana ireo sprint ireo ka zara raha mampiasa 55 amin'ny sprint aho. s vita teo aloha ary tsara be.
Fa eny, mety ho isika koa, 55 taona izy ireo ary hoy aho hoe, 'Ahodino fotsiny.' (mihomehy) - Marina izany, tsy dia misy firazanana firy, tena manana ny fampiantranoana azy ireo. Raha ny marina dia tsikaritro fa ny sisa amin'ny ekipanao dia manana azy ireo koa, sa tsy izany? ? Ka antenaiko ny hahita ny fiaran-dalamby volom-boasary eny aloha, fantatrao, amin'ireo sprint ireo ary iza no mahalala, raha mahazo tailwind be koa isika dia hihomehy ianao, sa tsy izany? - Ie? , izany no zavatra, tiako holazaina, amin'ireto lalana fisaka ireto dia mahazo tailwind ianao ary manana, fantatrao, faingana eo alohan'ireto, afaka ry zalahy ireo, efa zatra azy ireo ary mihazakazaka 54, 55 taona ary manosika anao tontolo andro izy ireo ka fantatrao Ianao, indraindray manampy amin'ny fidirana amin'ny fitaovana. (mihomehy) - Marina, antenaiko fa nankafizinao io fijerinao an'i Ty Magner's Diamondback Equipe io.
Ampahafantaro ahy ao amin'ireo hevitra inona ny hevitrao momba an'io. Aza adino koa ny mizara an'ity lahatsoratra ity amin'ny namanao ary koa amin'ny lahatsoratra roa lehibe hafa, ahoana ny eto ambany, raha maninona no tsy manenjika ny Stemsandanao eto ianao ho an'ny bisikileta pro hafa.
Tsara kokoa ve ny Trek na Diamondback?
Na izany aza ny marimaritra iraisana dia izanyDiamondbackbisikileta notsara indrindraSafidy ho an'ny mpitaingina izay tsy azonao antoka ny hanolo-tena tanteraka amin'ny fanatanjahantenadianyNy bisikileta dia miompana amin'ilay mpitaingina matotra izay manao fampiasam-bola lehibe kokoa ho an'ny fialamboly.
Inona no tsara kokoa Diamondback na Raleigh?
Diamondbackdia mpanamboatra bisikileta malaza miaraka amina vokatra isan-karazany kalitao. Ny tanjon'ny orinasa dia ny hanome vokatra misy singa tsara kalitao, izay manome ny fampiononana ho an'ny mpampiasa sy ny fahombiazany tsara.RaleighMatanjaka ny bisikileta, ary vita amin'ny alimo sy vy ny endriny.
Tsy mandeha intsony ve ny bisikileta Diamondback?
Tamin'ny taona 1999,Bisikileta Diamondbacknovidian'ny Derby Cycle Corporation, izay tompon'ny Raleigh ihany koaOrinasa bisikileta, ary natambatra Raleigh aryDiamondbackmiaraka. Tamin'ny 2001, Derby Cycle Corporation nivarotra an'i Raleigh syDiamondback. Tamin'ny volana Aogositra 2019 dia nivarotra ny Accell GroupDiamondbackto Regent, L.P.
Diamondback tsara kokoa noho ny goavambe?
Ny tena maha samy hafa azygoavam-beSYDiamondbackdia ity mivarotra amin'ny Internet ity farany.goavam-bemanolotra bisikileta feno fa mila mivory ampahany ianao aDiamondbackny tenanao. Ireo marika roa ireo dia manolotra bisikileta misy teti-bola tsara nefagoavam-bemanolotra bisikileta amin'ny sokajy rehetra.Diamondbackmanana laharana kely kokoa.
Lafo ve ny bisikileta Diamondback?
Mamitaka.DiamondbackAtroz dia tsipika fidirana an-tsehatra sy fampiatoana tanteraka ny vao manombokabisikiletanatokana ho an'ireo izay vao manomboka amin'ny làlana. Amin'izao fotoana izao dia misy maodely telo misy, antsoina hoe Atroz 1, Atroz 2, ary Atroz 3. Raha tianao izy ireo, dia lafo eo anelanelan'ny $ 700 sy $ 1.500 ny vidiny.09.10.2020
Manana kickstands ve ny bisikileta Diamondback?
nyDiamondbackSquarekickstandmanome anao fahalalahana hampijanona ny anaobisikiletaanywhereno miankina miankina! Mifanaraka mivantana amin'ilay rojo vy izy io, ka tsy hampihena anao koa.
Misy kalitao tsara ve ny bisikileta Raleigh?
Ka hamaly ny fanontanianao,Raleighdia toy nytsaranykalitaotahaka ny misybisikiletafivarotam-pivarotanabisikiletaamin'ny vidiny mitovy amin'izany. Raha mampitaha ianaoRaleighmiaraka amin'ny marika ambony toy ny Trek na Specialised na Cannondale dia ho hitanao amin'ny ankapobeny izanyRaleighhanana singa tsara kokoa amin'ny vidiny mitovy na singa mitovy amin'ny vidiny ambany.
Moa ve Giant manao bisikileta Raleigh?
naRaleighSYgoavam-bemitondra fampisehoanabisikiletaho an'ny bisikileta matotra.goavam-be, ohatra, mampiasa ny làlany TCR Advancedbisikiletaendriny mifanaraka tsara amin'ny làlambe avo lentabisikiletaho an'ny mpampiasa.Raleighdia mikendry bisikileta matihanina na amin'ny làlany na an-tendrombohitrabisikileta.8. 2011.
Bisikileta Walmart ve i Diamondback?
DiamondbackAndalana 27.5 '9 Hafainganana Shimano Hardtail MountainBisikileta, MD 18 'Frame -Walmart.with -Walmart. miaraka.
Iza no bisikileta tsara indrindra Diamondback novidina?
Nandritra ny taona 80 sy '90, ny marika dia niitatra be tamin'ny bisikileta an-tendrombohitra ary nametraka ekipa bisikileta an-dalambe. Na dia tsy handinika ny iray amin'ireo bisikileta ala indrindra aza izahay, ny Diamondback Andean, izay asa kanto amin'ny azy manokana, dia hifantoka amin'ny bisikileta tsara indrindra amin'ny lalana Diamondback ho an'ity lahatsoratra ity izahay, na amin'ny maodelin'ny frezy na ny kapila.
Oviana no nivoaka ilay bisikileta lamosina voalohany?
Tany am-piandohana dia nifantoka tamin'ny bisikileta BMX sy mpitaingina mpanohana fotsiny izy ireo izay nanampy azy ireo ho lasa fantatry ny besinimaro tamin'izany. Nomena ny anarana hoe Diamond Back (ary avy eo DiamondBack) ilay marika, saingy novainy ho Diamondback ilay anarana. Tamin'ny 1982, Diamondback dia nanangana ny maodelin'ny MTB voalohany nantsoina hoe Ridge Runner.
Ohatrinona ny lanjan'ilay taonjato faha-2 diamondra?
Na izany na tsy izany, ao anatin'ity famerenana bisikileta an-dalambe diamondra ity, ny Century 2 dia efa noresahinao. 21 kilao monja izy io, izay mahatonga azy ho lehibe raha tianao hatsipy ao anaty fiara izany na apetaho amin'ny fitoeran-bisikileta. Bisikileta maro no manery ny vatanao ho amin'ny toerana ambany izay tsara amin'ny aerodynamika.